Software မသုံးပဲ Internet Speed လေးမြှင့်ပြီး သုံးကြည့်ရအောင် | ၀င်းကို (နည်းပညာ)
Software မသုံးပဲ Internet Speed လေးမြှင့်ပြီး သုံးကြည့်ရအောင်
အခု ကျွန်တော် ရေးပေးမဲ့ နည်းလမ်းလေးကတော့ အင်တာနက် အသုံးပြုတဲ့ အခါမှာ မိမိတို့ကွန်ပျူတာက အသုံးပြုသူ ( Client Computer ) အဖြစ် အသုံးပြုတဲ့ သူများအတွက် အင်တာနက် Speed ကိုတိုးပြီး အသုံးပြုလို့ ရမယ့် နည်းလမ်းလေးပါ .. ကျွန်တော်လည်း အားလုံးအတွက် အဆင်ပြေမယ် ထင်လို့ ပြန်ရေး ပေးတာ ဖြစ်ပါတယ် .. ဒီနေရာမှာ တစ်ခါထဲ ပြောပြပါရစေ .. မေးခွန်းမေးရင်လည်း ဖြေလို့ ရမဲ့ မေးခွန်းမျိုးကို မေးတာ ပိုအဆင်ပြေမယ် ထင်ပါတယ် .. မြန်မာနိုင်ငံမှာ ပေးနေတဲ့ အင်တာနက်လိုင်းတွေ တစ်ချို့လိုင်းတွေ ပျက်နေတယ် .. လိုင်းတွေက မမှန်ပဲ တက်လိုက်ကျလိုက်တွေ ဖြစ်နေတာတွေက ကျွန်တော်လည်း ဘာမှ လုပ်ပေးလို့ မရပါဘူး .. အဲ့ဒါမျိုးကို ဘယ်လိုလုပ်ရမလည်း မေးရင်တော့ ကျွန်တော်လည်း ပြန်ဖြေပေးဖို့ ခက်ပါလိမ့်မယ် .. လောလောဆယ် အဆင်ပြေနိုင်မဲ့ နည်းလမ်းလေးကိုတော့ ကျွန်တော် အောက်မှာ ပုံလေးတွေနဲ့ အဆင့်ဆင့် ရှင်းပြပေးထားပါတယ် ..
အရင်ဆုံး Keyboard မှ Ctrl + R ကိုနှိပ်ပြီး Run Box ကိုဖွင့်လိုက်ပါ .. ပြီးရင် Run Box ထဲမှာ gpedit.msc လို့ရိုက်ထည့်ပြီး Enter ခေါက်လိုက်ပါ .. ဒါဆိုရင် Local Group Policy Ediitor Box ပေါ်လာပါလိမ့်မယ် .
အောက်ကပုံအတိုင်း ပေါ်လာပြီ ဆိုရင်တော့ ပုံမှာ ပြထားတဲ့ အတိုင်း Administrative Templates >> Network >> QoS Packet Scheduler ဆိုပြီး အဆင့်ဆင့် သွားပြီး QoS Packet Scheduler ကိုရောက်ပြီ ဆိုရင် ညာဘက်က Limit reservable bandwidth ကိုရှာပါ .. တွေ့ပြီဆိုရင် အဲ့ဒီကောင်လေးကို Double Ckick ပေးလိုက်ပါ ..
အောက်ကပုံအတိုင်း Limit reservable bandwidth Box လေးပေါ်လာပါလိမ့်မယ် .. အဲ့ဒီကျရင် ပုံမှာ ပြထားတဲ့ အတိုင်း Not Configured ကို Enable ပေးလိုက်ပါ .. ပြီးရင် Bandwidth limit ( % ) ကို 20 မှ 80 ပြောင်းပေးလိုက်ပါ .. ပြီးရင်တော့ Apply >> OK ပေးလိုက်ယုံပါပဲ ..
ဒါကတော့ Client Computer တွေမှာ Internet Speed ကို လက်ရှိ Bandwidth Limit ထက်ပိုပြီး မြှင့်ပြီး သုံးနိုင်မဲ့ နည်းလမ်းလေးပဲ ဖြစ်ပါတယ် .. သုံးကြည့်ချင်တဲ့ သူတွေကတော့ စမ်းကြည့်လိုက်ပေါ့ဗျာ ..
Posted by Win Ko Ko Hlaing at 3:56 AM
Minchitthu Lso September 23, 2013 at 9:03 AM
ko tut October 16, 2013 at 11:27 PM
ko tut October 16, 2013 at 11:29 PM
ko tut October 16, 2013 at 11:30 PM
ko tut October 16, 2013 at 11:41 PM
New Light November 9, 2013 at 11:06 PM
i appreciate your helpful and share to each other .I keep in bookmark your blog .If I need you ,will you help?
Anonymous November 13, 2013 at 2:20 AM
htinlin naing January 1, 2014 at 1:17 AM
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာ ok ပဲ
ကိုကို ချစ် January 4, 2016 at 9:27 AM
အခုလို computer နဲ့ပတ်သက်တာလေးတွေတင်ပေးတာကျေးဇူးပါ အကို
Up To Date မြန်မာသတင်းများ
မျိုးဆက်သစ် အွန်လိုင်းပရဟိ ဆိုင်ရာများ ဓမ္မဒါန ၀က်ဆိုက်အလှုအကြောင်း (3) ပရဟိတအလှု နှင်ဆိုင်သော (13) မလေးရှားမှ ဘာသာရေးအလှုများ (3...
WiFi ဟက်ဖို့ အလွယ်ဆုံးနည်း (ပုံနှင့်တကွ တစ်ဆင့်စီ ရှင်းပြပေးလိုက်ပါတယ်)
ကျွန်တော် အစကတော့ ဒီပိုစ့် ဆက်မရေးတော့ဘူးဆိုပြီး ပစ်ထားလိုက်တာ ဒီနေ့ ပျင်းနေတာနဲ့ ပြန်ဆက်ရေးဖြစ်ပါတယ် ကျွန်တော်တို့ WiFI hack လုပ်...
အခု ကျွန်တော် ရေးပေးမဲ့ နည်းလမ်းလေးကတော့ အင်တာနက် အသုံးပြုတဲ့ အခါမှာ မိမိတို့ကွန်ပျူတာက အသုံးပြုသူ ( Client Computer ) အဖြစ် အသုံးပြ...
Facebook Account ကို Confirm Code မတောင်းအောင်ဖွင့်နည်း
အခုရက်ပိုင်းအတွင်း Facebook အကောင့်အသစ်ဖွင့်တိုင်း Email Confirmation လုပ်လိုက်တာနဲ့ တစ်ခါတည်း အကောင့်ကာ လော့ကျသွားတာတွေ ကြား...
မည်သည့် Software မှ မသုံးပဲ Windows က နေ WiFi Hostspot လွှင့်ပြီး Internet ရှယ်နည်း--
ကြီးကြီး နဲ့ ကြည်ကြည် ကြည့်ချင်ရင် ပုံကို ကလစ်လိုက်ပါ-- Software သုံးတယ်ဆိုတာ Memory စားတဲ့ အပြင် RAM တက်ပြီး စက်ပါလေးလာပါတယ်-- အခုလိ...
အောက်ပါ လင့်မှ နှစ်သက်ရာစတိုင်ကိုကြည့်၍ Downloadဆွဲလိုက်ပါ Earth Live Wallpaper.apk Nexus live wallpaper .apk S...
ကျွန်တော် ဒီနေ့တော့ အားလုံးအတွက် ကွန်ပျူတာကို လေ့လာနေသူတိုင်းအတွက် သိသင့်တဲ့ အခြေခံ အချက်လေးတွေကို ရေးပေးသွားပါမယ် .. ကျွန်တော် ဒီအ...
Android Phone Lock Pattern မေ့နေပါက ပြန်လည်ဝင်ရောက်နည်း
Android ဖုန်းတွေမှာ လုံခြုံရေးအရ သင့်ရဲ့ ဖုန်းထဲက အချက်အလက်တွေကို တခြားလူ အလွယ်တကူ ဝင်ကြည့်နိုင်ဖို့ Lock Pattern နဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ် Pin Numb...
ဖုန်းမှာ ဘက်ထရီအကုန်မြန်နေသူများ ဒီဆော့ဝဲလေးကို ထည့်ထားလိုက်ပေတော့ လိုအပ်တာမှန်သမျှ ဒီဆော့ဝဲလေးက ချိန်ဆလုပ်ဆောင်သွားတာ အဆင်ပြေတယ် အင်...
ကွန်ပျုတာ အတွက် လုံခြုံသင့်တော်တဲ့ USB locker ( သံ...
ဖိုင်တွေကို ဒီသော့နဲ့ ခတ်ရင် ကူးမရ ၊ ဖျက်မရ ၊ ဖွင်...
ဓာတ်ပုံ နောက်မှာ ဖိုင်တွေကို ၀ှက်(ဖွက်) နည်း
ကိုယ်ကြိုက်တဲ့ ဓာတ်ပုံနောက်မှာ ဖိုင်တွေကို ဖွက်ထား...
Window 8 Install လုပ်ခြင်းနှင့် လက်တွေ့အသုံးပြုနည်...
စက်ရဲ့ Connection Speed နဲ့ IP ကိုဘယ်လိုကြည့်မလဲ ?...
Blog မှာ 3D social Icons နဲ့အတူ spin Effect ဘယ်လို...
Blog မှာ နှင်းကျနေတဲ့ Effect ထည့်နည်း
Blog မှ Related post ဘယ်လိုထည့်မလဲ
ကွန်ပျုတာဗဟုသုတ လေ့လာသူတိုင်း သိစေချင်တဲ့ ဟာလေးတွေ...
ဘာသာစကား 24 မျိုးကို အွန်လိုင်းကနေ တိုက်ရိုက်ပြန်ဆ...
အင်တာနက်သုံးနေသူတွေအားလုံး ဘာပဲလိုချင်လိုချင် ဒီနည...
Android Phone Lock Pattern မေ့နေပါက ပြန်လည်ဝင်ရောက...
Window7မှာ ၀င်းဒိုးတွေ ထပ်နေတဲ့ ပြဿနာ ဘယ်လိုရှင်...
Blogger တိုင်း သိသင့်တဲ့ အချက်များ
Automatic Read More ပြုလုပ်နည်း
Scroll Bar Widget ပြုလုပ်နည်း
Random Post Widget ပြုလုပ်နည်း
Blog Post Title မှာ Picture ထည့်နည်း
Total Post / Comments Widget ပြုလုပ်နည်း
Different Background color/Image အသုံးပြုနည်း
How to Print your Blogger Post
Archives Title Post လုပ်နည်း
Blogger များအတွက် Picture Upload
Auther comments ကို highlightနဲ့ ပြနည်း
Blog မှာ HomePage Begin လုပ်နည်း (မိုးထက်မြင့်မှက...
Blog Post Title တွေကို Bold တင်နည်း
အင်တာနက်သုံးသူတိုင်း မသိမဖြစ်သိထားရမည့် key မျုား
ကျွန်တော်တို့ ကိုယ်ပိုင် အိုင်ကွန်လေးတွေ ကို ဆော...
သင့်ဆိုင်က ကွန်နရှင် နှေးနေပါသလား............ ?
သုံးလက်စကွန်ပျူတာကိုပဲ ခဏထားခဲ့ပြီး ဟိုနားဒီနားသွ...
Network ပေါ်မှတဆင့် Windows တင်နည်း
window မှာ ကိုယ်ပိုင် မက်စ်ဆေ့လေးတွေ မြန်မာလို လုပ...
window 8 ရဲ့ လှည့်ကွက်များ အပိုင်း (၁)
အခြား computer ကနေ Facebook account ကို လှမ်းပိတ်န...
google chrome မှာ saved password တွေကို ကြည့်နည်း
window 8 မှာ Task Manager ခေါ်နည်း
WiFi ဟက်ဖို့ အလွယ်ဆုံးနည်း (ပုံနှင့်တကွ တစ်ဆင့်စီ ...
မိမိကွန်ပြူတာ Hang ဖြစ်နေခဲ့ ရင်
ထရိန်း version ဆော့ ဝဲလ် တွေကို ကျော်မယ် ခွမယ်
အင်တာနက် Website ပေါ်က Flash Song ,Flash Photo , Im...
ဂျီတော့ နဲ့ဘလောက်စာမျက်နှာ တွေ မှာ မြန်မာလို မပေ...
ဖုန်းတစ်လုံးသာ အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် ရေထဲ ကျသ...
3G အကြောင်း တစ်စေ့ တစ်စောင်း
မည်သည့် Software မှ မသုံးပဲ Windows က နေ WiFi Host...
နည်းပညာလေ့လာသူများ သတိထားရမယ့် pdf virus အန္တရာယ်
Windows7တင်ထားတဲ့ Laptop သို့ PC တွင် RAM နည်းနေ...
Blog ရဲ့ Label တွေကို Scrollbar နဲ့ လုပ်ရအောင်
Template ဒေါင်းယူပြီး xml ဖိုင်ရယူနည်း & Template ...
USB Transfer Size ကို 64 kb ကနေ2MB အထိ မြှင့်ပြီ...
English အတွက်လှပသောစကားလုံးများ (ဖေ့စ်ဘွတ်မှကူးယူေ...
Facebook ကို မြန်မာဘာသာဖြင့် အသုံးပြုချင်သူတွေအတွက...
Who Unfriended Me On Facebook (Software)
မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ ကျွန်တော် ခုဖော်ပြပေးမဲ့ဆော့ဝဲလ်လေးက...
ဘလော့တွင် Menu ပြုလုပ်နည်း
ကွန်ပျူတာတွင် Blue Screen ဖြစ်ရခြင်းအကြောင်း
ဘလော့အလှဆင်နည်းနှင့် News Update ပြုလုပ်နည်း
ဘလော့တွင် Recent Post Slide ထည့်သွင်းနည်း
Use CMD for Blocking Sites
Firefox Theme ကလေး
Microsoft Office ကို Passwords နဲပိတ်နည်း
Computer အမှူက်ရှုင်းနည်း ။ ၁
Computer ကိုမ Slow အောင်ဘယ်လိုဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ။
Windows7ထဲက Game တွေကိုပိတ်နည်း။
Windows 8 အတွက် System Power Shortcuts
Win Ko Ko Hlaing
Copyright © ၀င်းကို (နည်းပညာ) | Designed By Mr.jockerlay